Famonoan-Dreniny ny Zanany, Fikasàna Hamono Tena Manasongadina Ny Enta-Mavesatra Ho an’ny Vehivavy Tajik · Global Voices teny Malagasy
Famonoan-Dreniny ny Zanany, Fikasàna Hamono Tena Manasongadina Ny Enta-Mavesatra Ho an'ny Vehivavy Tajik
Voadika ny 22 Oktobra 2015 3:06 GMT
Aloky ny reny sy ny zaza. Torange.us. Nahazo alàlana hampiasaina indray.
Fanindroany tao anatin'ny volana vitsivitsy no nitrangan'ny loza mahatsiravina mikasika reny manan-janaka telo nikasa hamono tena miaraka amin'ny zanany tany anaty rano ka nampikorontana ny fiaraha-monina Tajik hatrany ifotony. Voavonjy ireo reny mbola tanora tamin'ireo raharaha roa ireo, fa maty kosa ny zanak'izy ireo.
Tamin'ny 21 Septambra, andro vitsy mialoha ny fety lehibe silamo Eid al- Adha, vehivavy iray 23 taona antsoina hoe Salomat no nandoro ny tranony ho levona, ary nitondra ny zanany telo nankany amin'ny renirano Vakhsh tsy lavitra teo.
Tafavoaka velona avy tao anaty rano i Salomat avy eo rehefa navotan'ny mponina tao an-tanànany, fa ny zanany lahy Alisher, 4 taona, ary ny zanany vavy Sadbarg, 2 taona, sy Sumaya, enim-bolana no tsy azo navotana intsony.
Fanindroany io amin'ny tantara mahavaky fo toy izany tato ho ato.
Telo volana talohan'izany, naka ny zanany telo tao amin'ny tanàna izay nonenany ao amin'ny renivohitr'i Dushanbe ny vehivavy iray hafa atao hoe Parvina.
Taorian'ny fitsangatsanganana fohy tao amin'ny valan-javaboary ao an-toerana, nentin'i Parvina teny amoron'ny renirano lehibe izay mamakivaky an'i Dushanbe izy ireo ary nitsambikina tao anaty rano niaraka taminy. Raha toa ka voavonjy i Parvina, ny zanany lahy Ziyovuddin, 7 taona, ary ny zanany vavy dimy sy enina taona Omina sy Mahina kosa maty an-drano.
Tamin'ireo tranga roa ireo, feno fanamelohana ny fihetsik'ireo reny ny sehatra fiadiana hevitra, fizarana fanehoankevitra amin'ny tranonkalam-baovao, sy ny media sosialy :
Adala, nahoana no niteraka?
Meloka 100 % io vehivavy io, namono ankizy telo izy. Tsy manana olana ve ny vehivavy Tajik hafa ao an-tanàna? Tokony hisaotra an'Andriamanitra ianareo ka miaina ny fiainanareo. Tokony hiantsoroka ny andraikitry ny famonoana tena, ny fisarahana am-panambadiana, ary ny zavatra hafa rehetra ny vehivavy.
Tokony ho saziana mafy izany karazana mpamono olona izany. Ahoana ny reny no afaka mamono ny zanany naterany? Raha te-hamono tena ianao, nahoana ny ankizy koa no hatsipy any anaty renirano? Mianjerà ianao irery ao. Midika izany fa tsy hoe tsy manan-tsiny ny tenany, ary ny ankizy no vavolombelon'izany.
Voalaza ho dondrona ny vehivavy, tsy-olombelona ary izay zavatra hafa mampietry ataon'ny sarangan'ireo be resaka any amin'ny tany iray izay mitentina eo amin'ny $25 isam-bolana ny saran'ny aterineto na roa ampahatelon'ny karama farany ambany. Avy amin'ny fianakaviana izay miaina ambanin'ny fetran'ny fahantrana ireo vehivavy roa ireo, toerana izay izaràny amin'ny mihoatra ny ampahatelon'ny mponina.
Mikasika ny loza niseho tamin'ny Septambra, mbola tsy mazava ny toe-draharaha manodidina ny zava-nitranga. Ilay vehivavy tamin'ny loza nitranga ny volana Jolay, Parvina, nilaza fa very ny sainy rehefa nilaza taminy ny vadiny nandritry ny 11 taona fa te-hiala aminy ka hanome azy ho an'ny lahimatoa amin'ny rahalahy tsy omby kibo aminy.
Manohitra ny fironana amin'ny fanararaotana ny fandrakofana ny mpamono olona ny mpampiasa aterineto sasany ka nahita ireo loza roa toy ny latsa-paka ao amin'ny enta-mavesatra tafahoatra entin'ny vehivavy ao amin'ilay firenena mahantra indrindra mba hivoaka avy ao amin'ny faharavan'ny Firaisana Sovietika.
Tsy loza voalohany izao, na fahafolo. Tonga ny fotoana ho an'ny ray aman-dreny sy ny governemanta hieritreretany fa tsy tokony hampianatra fotsiny ny ankizivavy mahandro sakafo, manadio, sy miankina amin'ny ny vadiny, fa ihany koa tokony homena fahalalàna, homena asa ary ampiana izy ireo. Tonga ny fotoana tokony hametrahana foibe fanarahana ara-tsaina. Malahelo mafy aho amin'ireo ankizy, saingytsy azo avela tsy ho raharahina intsony ilay olana.
Mitranga izany rehetra izany satria tsy misy fiarovana ara-tsosialy ho an'ny mponina. Misy sampan-draharaha manana andraikitra amin'izany, nefa tena tsy misy ilàna azy. Tsy misy fandaharana mba hanohanana ny fianakaviana sahirana. Angamba [Salomat] nanana adin-tsaina sy fikorontanan-tsaina taorian'ny niterahany? Tantara mahatsiravina [ … ] Nahoana ny olona no tena mailaka hanafika azy amin'ny hoe “nahoana no manan-janaka ” [sy ny ompa hafa]?
Araka ny fikarohana nataon'ny Sampandraharahan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Fahasalamana (OMS) tamin'ny 2012, tonga any amin'ny toerana faha 139 i Tajikistan amin'ny firenena 172 raha mikasika ny isan'ny famonoana tena isaky ny mponina, famonoana tena 4,2 isaky ny olona 100.000. Manome antontan'isa mitovy amin’ izany koa ny UNICEF, nilaza fa nitombo 63%, 2,8 lasa 4,5 (isaky ny 100.000) teo anelanelan'ny taona 2008 sy 2010 ny taham-pirenena momba ny famonoana tena ao Tajikistan, ho an'ny tanora (15-19 taona).
Saingy tsy milaza afa-tsy ny ampahan'ny tantara ireo antontan'isa ireo.
Manodidina ny famonoana tena sy ny fikorontanan-tsaina ao Tajikistan ny fanilikilihana mafonja ara-tsosialy sy ny fitsarana, ary maro ny toe-javatra tsy nanaovana tatitra, etsy ankilan'izay ny media-mpanjakana tsy te hanasongadina ny tantara toy izany.
Angamba hanomboka hodinihina malalaka kokoa ny olan'ny famonoana tena noho ny fitombon'ny isan'ireo lehilahy izay mandray an-tanana ny fiainany manokana ankehitriny. Noho ny vidim-piainana tsy mitsaha-mitombo sy ny toekarena mijaly amin'ny afitsoky ny fiverimberenana mahatsiravin'ny krizin'ny robla any Rosia — mihoatra ny iray tapitrisa ny olom-pirenen'i Tajikistan miasa any, ka mahatonga azy ho lasa toekarena tena miankin-doha betsaka amin'ny fandrotsaham-bola avy any ivelany eto amin'izao tontolo izao — very ny toetra maha-manokana ny famonoana tena.
Any am-ponja amin'izao fotoana izao i Parvina, ilay vehivavy voavonjy tao anaty renirano tamin'ny volana Jolay, ary manefa sazy an-tranomaizina 15 ka hatramin'ny 25 taona. Nanakarama mpisolovava ho an'i Parvina ny Fikambanana Tsy Miankina misahana ny zon'ny vehivavy ao Tajikistan ary manao fanentanana momba ny fahasalamany ara-tsaina tamin'ny fotoana nisehoan'ny tranga mba hahazoana mampihena ny saziny an-tranomaizina.
Milaza ireo mpikatroka fa nomena ny sazy tena sahaza azy ireo vehivavy toa azy sy Salomat fotoana vitsy izay: ny karazana fiainana izay mety hitondra ho ao an-tsaina ny hamono ny tenany sy ny zanany.